Kubiza malini ukuthola icici? | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | 30/05/2021 22:57 | Ukunakekelwa komuntu siqu, imfashini, Amathrendi
Noma ngabe ungaphila kanjani isesekeli sakho esihle kakhulu ukufanisa indlela yakho yokugqoka. Ngaphandle kokungabaza, ukufaka icici noma cha kuzoba ukukhetha komuntu ngamunye futhi uma ungabaza ukuthi kungenzeka kudala umkhuba, ngokungangabazeki unguyebo. Kwaphela amashumi eminyaka ngisho namakhulu eminyaka kungumphelelisi ongakaze untule kumuntu.
Lapho wenza icici, kubalulekile ukuthi ukhethe kahle indawo nohlobo oluzolingana nesitayela sakho. Okunye ukubuyela emuva kungabiza malini ukukwenza futhi lokho kuzoya ngesiza nangendlela okwenziwe ngayo. Ukwenza lokhu, naka zonke izindawo lapho ungenza khona icici.
1 Izindawo nentengo lapho ungathola khona icici
2 Izinyathelo zokuhlanzeka ngaphambi nangemva kwecici
3 Ungazilapha kanjani izifo ezinzima
Izindawo nentengo lapho ungathola khona icici
Indawo yokuqala icici engenziwa ekhemisi. Kuyasebenza futhi kushibhile, ayikho intengo emisiwe yokunquma ukuthi ingabiza malini, kepha amanani entengo ayo aphakathi kwe- € 5 kanye ne- € 10, kuya ngenkonzo ekhemisi efuna ukuyinikeza nekhwalithi yocici elizofakwa, ngoba inani lifakiwe.
Indlela yakhe iqukethe i-lukufakwa kwamacici ngesibhamu, indlela elula, esheshayo nephumelelayo. Indlela yakhe ukubeka icici lokucindezela elenziwe ngezinto ze-hypoallergenic lapho inathi yalo lifakwa khona. Lolu hlelo lusebenza kahle futhi lunokuphepha ukuvimbela umuthi ekuhlukaniseni futhi akukho ukulimala.
Lezi amacici "hypoallergenic" Zenziwe ngezinto zokwakha ukuze zinganikeli ukungezwani komzimba nokuxhumana nesikhumba, okubizwa ngokuthi yi-allergen contact eczema. Iningi lamacici afakwa emakhemisi enziwa ngezinsimbi ezihloniphekile ezifana ne-titanium.
Isibhamu sokwenza amacici
Enye yezindawo lapho bachwepheshile ekwenzeni amacici kukhona izitolo zokubhoboza. Lapha kuzokwenziwa ngesandla, ukubhoboza indawo ngenaliti lapho icici lizofakwa khona manjalo.
Indlela abenza ngayo nobuchwepheshe obubekwa yilabo abakwenzayo, kuzokwenza intengo yabo ibe phezulu kakhulu. Okokubhoboza izindlebe okubili ingafinyelela ku- € 30 futhi uma kwenziwa ngakunye cishe ngama- € 20. Kepha zingamanani entengo, ngoba kuya ngendawo nobunzima, kuzosebenza inani elilodwa noma elinye.
Izinyathelo zokuhlanzeka ngaphambi nangemva kwecici
Kubalulekile landela uchungechunge lwezinyathelo zenhlanzeko ngaphambi kokwenza icici. Zonke lezi zindawo sezivele zilandela umthetho olandelwayo ngaphambi kokwenza, kepha uma ufuna ukwazi mathupha ukuthi ukulandelwa kwazo kunjani, naka.
Kokubili kwesibhamu kanye nendlela yokubhoboza ngesandla okufanele ube nayo konke okokusebenza okubulala amagciwane kanye nokuhlanzisisa, kufaka phakathi amacici azosetshenziswa. Kubalulekile ukuthi abasebenzi bagqoke amagilavu ​​ngenkathi bezijwayeza nokuthi indawo okuzofakwa kuyo icici ihlanzwe kahle.
Ukuphulukisa nganoma iyiphi yezindlela zayo kulula ukwenza, kodwa ukuphulukiswa kwayo njengomthetho ojwayelekile kuyinkimbinkimbi. Ukuhlanza indawo kufanele ube nezandla ezihlanzekile futhi kuya ngendawo abangancoma ngayo ukwelashwa ngandlela thile. Okufanelekile, hlanza indawo nsuku zonke nge- i-saline solution, i-crystalline noma i-spray chlorhexidine solution, ngemuva kokwenza ukujika okuphelele emthambekeni futhi ukuvumele kuphumule.
Ukuphulukiswa kwayo kuyinkimbinkimbi ngoba kuthatha isikhathi eside ukuphola. Kufanele ubekezele ngoba kukhona ukuphendula ngakho izifo kanye nokuvuvukala ngesikhathi sokuphulukiswa kwayo futhi kudala ukungakhululeki okuningi, ikakhulukazi ngesikhathi sokulala. Ukuphulukisa kungathatha unyaka ukwenza ngokusemthethweni futhi kubalulekile ukuthi ungalikhiphi icici ngoba umgodi ungavalwa.
Amacici amathathu endlebeni
Ungazilapha kanjani izifo ezinzima
Into ejwayelekile ngesikhathi sokuphulukiswa kwakhe ukukuqaphela lokho indawo ibomvu futhi kwezinye izimo kuzwakala ezinye izinhlungu nokungaphatheki kahle. Kepha lapho indawo ibomvu kakhulu, iba nzima, ivuvuke futhi uqaphele ukuthi kushubile ngokuthinta, kungenxa yokuthi unesifo esibi kakhulu.
Ngokufanelekile, beka amagciwane endaweni izikhathi eziningana ngosuku izinsuku eziningana., ungaluthinti icici ulishiye limile. Uma isimo singathuthuki futhi ubovu (uketshezi oluphuzi) buqala ukuphuma, kufanele ubone udokotela ukuze athole ukwelashwa okuphumelela kakhulu. Kulezi zimo, a ukhilimu wama-antibiotic ukwelapha le ndawo.
AmaKeloids enye inkinga lokho kungavela ngesikhathi senqubo yokwelashwa. Kunabantu okuthi, ngenxa yohlobo lwesikhumba sabo, babe nenye indlela yokwelapha la manxeba. Kulokhu, izicubu ziphilisa ngaphandle, zikhiqize isigaxa esincane okuthiwa i-keloid.
Ezinye izinkinga kungaba ukuthi icici ayenziwe ngento efanelekayo ukuze umzimba wakho ukweseke. Uma usola ukuthi lokhu akuyona into evumela indawo ukuthi yelaphe kahle, funa enye ene-alloy engcono. Kulawa macala, okusebenza kahle kakhulu yigolide.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kubiza malini ukuthola icici?